Gbasara Anyị - BOEDON INDUSTECH LIMITED
AKWONKWỌ NDT AKW LKWỌ AKW LKWỌ AHON
Boegger na-agbakwunye "mepụta uru maka ndị mmekọ," ụkpụrụ bụ isi nke ịkwụwa aka ọtọ, nnagide, ihe ọhụrụ, ọrụ "dịka mmụọ nke ụlọ ọrụ, iji mepụta uru maka ndị mmekọ site na mmepụta onwe ha na imekọ ihe ọnụ.
Na ịmepụta uru maka ndị mmekọ. "
Boegger ulo oru amaghi, na ndị ahịa, ndị na-ebubata ya, ndị na-eketa oke ya, ndị ọrụ ya, na mmekọrịta ha na-arụkọ ọrụ ọnụ n'etiti ndị otu na ndị ha na ha na-emekọrịta ihe, yana naanị site na mbọ iji mepụta uru maka ndị mmekọ, iji mata uru nke ha na ịnweta mmepe na ihe ịga nke ọma.
"Ime ihe n'eziokwu, ndidi, ọhụrụ, ọrụ"
Boegger ulo oru mmachi. na ịkwụwa aka ọtọ bụ ntọala nke imekọ ihe ọnụ niile, nnagide bụ ihe mbido idozi nsogbu, ihe ọhụrụ bụ ngwa ọrụ maka mmepe ọrụ yana ọrụ bụ isi iji mepụta uru.
Karịa ngwaọrụ 40
Karịa ndị ọrụ 30
Ihe karịrị ndị ọkachamara 20
Mbupute kwa ụbọchị
(1) Osimiri, ala, ikuku, na ụgbọ njem ụgbọ mmiri zuru oke na-edozi nsogbu njem ndị ahịa.
(2) Nye ntuziaka ntinye na ntuziaka (ederede na vidiyo)
(3) Nyere aka n'ịmezi nsogbu nke nkwakọ ngwaahịa na mmebi ngwaahịa n'oge njem.
(4) Na-edozi mkpesa nke ọma.
(5) Iji ezi uche dozie nsogbu nke nloghachi na nkwụghachi.
(6) Inyere aka inyochaa usoro iwu ọnụahịa mpaghara si arụ ọrụ.
Ihe niile ị chọrọ ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ mara mma